Kenya oo Kolkii Ugu Horaysay Aqoonsatay in Kooxda Jwxo-shiil Joogto Dalkeeda Dilalna ka Fulisay – Rasaasa News
Garrissa, Sep 11, 2011 [ras] – “Koox argagixiso looga aqoonsaday dhawaan dalka Ethiopia, oo lagu magacaabo ONLF, ayaa dhibaatooyin xasilooni dari ah ka abuurtay dalka Kenya, gaar ahaan gabalka NFD” sidaasi waxaa yidhi taliyaha ciidanka Booliska ee gabalka James Ole Serian.
Ururka ONLF, ee burburay ayaa dhibaatooyin kula soo galgashay Kenya, ka dib kolkii ay qaybtii ugu muhiimsanayd ururka la heshiisay Ethiopia. Waxaa kale oo heshiis la galay Ethiopia ururka WSLF.
Xubno ka soo caray Ethiopia oo la soo galay hub Kenya, ayaa waxay gaysteen dilka 14 oo lagu dilay meelo kala duwan oo Kenya ah.
Iimaamka magaala Garrisa ayey koox sheegatay ONLF, ugu hanjabeen Imaamka in ay dilayaan iyaga oo ku eedeeyey in uu xidhiidh la leeyahay urarada nabada qaatay ee Ethiopia.
Warbixintu waxay sheegtay in ay kooxdu doonaysay in ay ka dhex abuuraan Kenya iyo Ethiopia khilaaf, kolka ay sameeyaan dilal la garan waayo.
Kooxda waxaa gacan siiya ayuu Boolisku yidhi dad Kenyan aha oo ay ka mid yihiin masuuliyiin ka mid ah xisbiga xukuma dalka Kenya oo Somali ah.
Gudiga culimada magaalada Garrisa oo uu ka mid yahay Imaamka Sheikh Xasan Camey, ayaa sheegay in magaalada ay joogaan dagaalyahano shisheeye.
Taliyaha Booliska ayaa sheegay in ay heleen xogo dhab ah, kuna daba taagan yihiin xubno sare oo ururkaas ah, waxaa kale oo ay xidheen qaar badan.
Dawladu hore way u ogayd in ay joogaan dalka xoogag shisheeye, laakiin hore dhibaato uma gaysan xoogagani, waxaana ay dawlada isku af dhaafeen xubno baarlamaanka ah, oo lagga shakisan yahay in ay ku abuureen Kenya urur argagixiso.
Gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Waqooyi Bari Kenya, Ismaciil Cabdiqadir, ayaa dawlada ka codsaday in ay dawladu wax ka qabato ururada hubaysan ee jooga dalka Kenya.
Maanta ayey koox hubaysan oo ay Boolisku ku macneeyeen in ay yihiin ururka dilalka ka gaystay Garrissa ay afduubeen Dooni, ka dibna ay dileen nin Ingriis ah isla markaasna afduubteen xaaskiisi.
Islaanta al afduubay ayaa lala aaday koonfurta dalka Somaliya, waxaana aad looga shakisan yahay budhcad ka soo gudubtay Ethiopia, oo loo malaynayo in uu kaga aar gudanayo xadhig loo gaystay xubno kuwood ah.